Ingulube sirloin enebhiya ebhodweni elisheshayo, isidlo esilula kakhulu | Ukupheka Kwekhishi
Ingulube sirloin enebhiya
UMontse Morote | | I-Spanish Cuisine, Okufakiwe Okushisayo
Iresiphi ephelele yokumangaza umndeni, a ingulube ethambisa ubhiya. Iresiphi elula elungiselelwe ngesikhathi esifushane.
Ithenda yengulube iyinyama ecebile futhi enamanzi amaningi, enamafutha amancane, kuhle kakhulu ukukulungiselela kumasoso, ithenda kakhulu futhi imnandi. Sizokulungiselela kufayela le- indlela yokupheka esheshayo, indlela esheshayo nelula yokupheka.
2 amathenda wenyama yengulube
Imbiza engu-1 yamakhowe
1 ikani likabhiya
Ingxenye yengilazi yamanzi
1 ikhukhi le-bouillon
Silungisa ama-sirloins, siwahlanze kunoma yimaphi amafutha asele bese sengeza usawoti kanye nopelepele.
Sibeka ibhodwe emlilweni ngejethi enhle yamafutha bese sifaka imicu ngaphakathi bese siyibopha ngokushisa okukhulu kuzo zonke izinhlangothi ukuze siyivale kahle. Siyahoxa
Kowoyili ofanayo sibeka u-anyanisi oqoshiwe bese siwushiya imizuzu engu-3-4 ukuthatha umbala omncane, eduze kuka-anyanisi sibeka isipuni sefulawa sihlanganise konke ndawonye.
Sifaka ama-sirloins, sifake ubhiya bese kuthi uma uqala ukubila siwushiye imizuzu emithathu ukuze utshwala buphele, sibeka uhhafu wengilazi yamanzi noma ingilazi uma sifuna u-sauce omningi, i-stock cube ne-bay leaf, simboza ibhodwe futhi lapho i-steam iqala ukuphuma siyishiya imizuzu eyi-3-15, sicishe ibhodwe bese sihamba kuze kuphume wonke umusi.
Sivula ikani lamakhowe bese siwafaka epanini ngamafutha amancane.
Sisusa inyama futhi uma ifudumele siyayisika, sidlulisa isoso nge-blender, siyibuyisele ebhodweni kanye nenyama esikiwe kanye namakhowe, siyayishisa.
Uma i-sauce ingumgogodla omncane, chaza ummbila omncane emanzini abandayo futhi sizowufaka kusoso.
Sikubeka emthonjeni ohambisana namakhowe.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Abangane » Okufakiwe Okushisayo » Ingulube sirloin enebhiya
Sawubona, ngenze iresiphi yakho futhi ngayilandela iphuzu ngephuzu njengoba uyichaza. Ngemuva kokuthi i-sirloin ibanda ngiyifake esiqandisini futhi ngemuva kwamahora ama-3 ngazama ukuyisika. Umsebenzi ongenakwenzeka uphonswa inselelo ngokuphelele yize usayine kahle ummese, futhi lokho akukubi kakhulu ukuthi uqina, indwangu ye-parakeet, engadleki ngiyilahlile. Ngicele othile emndenini wami futhi angitshele ukuthi kwisipheki sokuphoqa imizuzu eyi-10 ngakho-ke akusheshi, ingasaphathwa-ke wena uthi iphakathi kwemizuzu eyi-15 nengama-20. Angizukuzama ezinye izindlela zakho zokupheka, kufanele uzenzele zona ngaphambi kokuzibhala. Ungimoshele lesi sidlo.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngivivinye iresiphi yakho enhle.Iqiniso ukuthi iphumelele, okuwukuphela kwento eyishintshile ukuthi bengiyiphethe ebhodweni imizuzu eyi-10 kuphela futhi iphume imnandi futhi ilungele ukudliwa. Kuhle kakhulu iresiphi.
Ukumnika ukumuncwa uphayinaphu, i-apula netiye eliluhlaza
Isidlo sakwa gogo